Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseYurophu » Isizini entsha yaseYurophu yokushushuluza ilenga esilinganisweni
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Sports • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Isidingo sohambo lokushushuluza e-Europe kulindeleke ukuthi sibambe iqhaza kulo nyaka ngenxa yokukhuphuka kwamacala e-COVID-19 kanye nokuncipha kwezinyawo okungenzeka kube khona ezindaweni ezinkulu zokushushuluza ekuqaleni kukaDisemba.
UDisemba ngokuvamile ubona abahambi abasafufusa be-skiing beya khona Europe, eqeda ukwehla kohambo lwezwekazi lwangemva kwehlobo. Isibonelo, i-Europe yabona uhambo lwasekhaya noluphumayo lwenyuka ngamaphesenti angama-38.3 ukusuka ngoNovemba kuya kuDisemba ngo-2019 - unyaka wokugcina ongathinteki ngenxa yalolu bhubhane.
Lokhu kwanda okuqinile kwesidingo samaholide ngoDisemba kuvame ukudlala ezandleni zezindawo zokungcebeleka eqhweni zase-Europe, kanti abaningi babeka uDisemba njengokuqala kwesizini esemthethweni yokushushuluza. Kodwa-ke, ukwanda okujwayelekile kwesidingo kuzoba nomthelela njengoba lolu bhubhane, futhi, luphinde luphakamise ikhanda lalo ezimakethe ezinkulu zemithombo ye-ski nezindawo.
Ngokocwaningo lwakamuva, ama-25% abantu baseYurophu abaphendulile bathi 'basakhathazeke kakhulu' ngobhubhane lwe-COVID-19. Amaphesenti abalulekile kangako alenzi kahle, futhi inkampani ilindele ukuthi abantu abaningi baseYurophu bazomisa noma bakhansele izinhlelo zamaholide uma bebona ukuthi ukudluliselwa kwegciwane sekuqala ukwanda futhi.
Izindawo ezishisa izikhotha e-Skiing eFrance, e-Italy naseSwitzerland zizosaba okubi kakhulu, njengoba abaningi bethembele kulezi zinyanga ezizayo ukulungisa okunye ukulahlekelwa okutholwe kumasizini amabili edlule. Europe, futhi, izithola isiphakathi kwalolu bhubhane - njengoba nje isizini yokushushuluza iqala ukuba nomfutho.
Isimo se-COVID-19 ku Germany kungaba yisici esibalulekile esinqumayo empumelelweni yesizini ezayo yaseYurophu yokushushuluza. I-Germany inabashushuluzi abaningi kunanoma yiliphi elinye izwe e-Europe, okwenza le makethe yomthombo ibaluleke ngendlela emangalisayo ezindaweni zokushushuluza eqhweni. Ukwengeza, iJalimane ibiyimakethe yesithathu ephezulu kakhulu yokusetshenziswa kwemali ephumayo emhlabeni wonke ngo-2020, ikhombisa amandla ayo okusebenzisa kanye nokuzimisela ukuqhubeka nohambo lwamazwe ngamazwe ngesikhathi sodlame.
Njengoba kwabikwa ngoNovemba 24, 2021, isibalo sezifo ezintsha ze-COVID-19 ezibhaliswe phakathi nosuku olulodwa sesifinyelele phezulu okusha Germany. Ngaphezu kwalokho, izigameko ezweni lonke zezinsuku eziyisikhombisa zenyuka ngaphezu kuka-400. Lezi zibalo ezishaqisayo ngo Germany izodala isizathu sokukhathazeka phakathi kwezindawo zokushushuluza eqhweni zaseYurophu njengoba imikhawulo yokuvakasha ingase ilandele, idale umthelela omkhulu ekwenziweni kwemali kwezindawo zokungcebeleka namanye amabhizinisi axhumene nokuvakasha kokushushuluza.